Mayelana NATHI - Wuxi Flyt New Energy Technology Co., Ltd.
Sizinikele ekunikezeni amakhasimende ethu imikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nezinsizakalo ezenelisayo.
I-Wuxi Flyt New Energy Technology Co, Ltd., Ingumkhiqizi ochwepheshe wezinhlelo zomoya ophephela abancane nabaphakathi nensiza efanelekile. Besibambe iqhaza ocwaningweni nasekusebenziseni imishini yokuphehla ugesi emincane kusuka ku-100w-50kw iminyaka eminingi. Isisekelo esikhulu sokukhiqiza esimboza indawo engamamitha-skwele ayi-1000 sisedolobheni laseWuxi, esifundazweni saseJiangsu, amakhilomitha ayi-120 ukusuka eShanghai namakhilomitha angama-200 ukusuka eNanjing, ngenethiwekhi yezokuthutha enomsindo yomgwaqo wamanzi, indlela ezwakalayo, ujantshi nesikhumulo sezindiza nxazonke.
Inkampani yethu manje inenqwaba yabasebenzi abaqeqeshiwe, izindawo zokukhiqiza ezithuthukile nezokuhlola, ikakhulukazi umhubhe womoya ongadala izimo ezifiselekayo zokuthuthukisa nokuhlola imikhiqizo futhi eminyakeni edlule isungule uhlelo oludidiyelwe lokuklama, ukukhiqiza, ukumaketha, ukufakwa, ukulungisa iphutha nangemva kokuthengisa. Imishini yomoya i-CE, iqinisekiswe yi-ISO futhi amalungelo obunikazi ahlonishwa. Ilungelo lempahla yabanikazi nokusebenzisana okubanzi nemakethe yamazwe ngamazwe kukhulumela ikhwalithi, ukwethembeka nokusimama kwemikhiqizo yethu. Sinamaphrojekthi we-turbine yomoya kulo lonke elaseChina naphesheya kwezilwandle konke okutholwe kahle.
Isitatimende sethu semishini
Singabenzi bemikhiqizo emisha ngokushesha.
Sinikeza izindlela zokuqinisekisa zabakhi bomkhiqizo;
Singumkhiqizi wokuhlinzeka ngesisekelo esijwayelekile.
Sivumela ikhasimende lizizwe linolwazi oluphelele lokuklama, lisize ekuzuzeni inani lalo.
Sizozinikela ngokugcwele ukuthuthukisa imizamo yokwaneliseka kwamakhasimende, ukukhulisa inani elengeziwe lamakhasimende.
ukuqaliswa okusha, onesibindi ngokuxhashazwa
ikhwalithi futhi isebenza kahle
Ikhwalithi yesevisi yamakhasimende iyimpilo yenkampani, futhi iyisisekelo lapho isisebenzi ngasinye.Senza konke okusemandleni ukwenza lonke ukwaneliseka kwamakhasimende, ukuze i-oda ngalinye lenziwe ngokuphelele.
Gcina umqondo ovulekile, imibono emisha, hlola izindlela ezintsha, qhubeka nokudlulela ngalé kwalokho.
Gcina ukuzinikezela kobungcweti, ukusebenzisana, ukwenza okuhle, ube yiphayona lomkhakha.
Qhubeka uthuthuke, dala umkhiqizo wekhwalithi ephezulu weqe okulindelwe ngamakhasimende.
Thuthukisa ukusebenza kahle, ukuphendula ngokuqhubekayo okusheshayo kuzidingo zamakhasimende.
Thatha ikhasimende njengesikhungo, ekuthuthukisweni kwamabhizinisi njengesiqalo, ngokususelwa ezinzuzweni zabasebenzi, ngokuqhubekayo kuthuthukiswa ikhwalithi yensizakalo yamakhasimende, ukuhlinzeka ngendawo ebanzi yentuthuko kubasebenzi bebhizinisi, ukufeza ikhasimende, ibhizinisi, ukuphumelela kwabasebenzi- win isimo.